Shirka jaraa’id ee Trump wuxuu ahaa ‘mid aad u hooseeyo’ |
Shirka jaraa’id ee Trump wuxuu ahaa ‘mid aad u hooseeyo’
Shirka jaraa’id uu madaxweyne Trump uu qabtay Isniinta xalay wuxuu ahaa kii ugu argagaxa badnaa, aadkana u hooseeyey oo aan abid ka qayb galo.
Shirki jaraa’id ee Bill Clinton uu qabtay 1998-kii ayaan ka qayb galay xilligaasi oo Clinton uu marki ugu horreysay kaga hadlayey fadeexadi lo haystay ee xiriirka kala dhaxeeyey Monica Lewinsky.
Haddana waxaan ka qayb galay shirka jaraa’id u madaxweynahan ku qabtay aqalka cad wuxuuna iigu yeeray “qurux kale”. Waxaan joogay shirki jaraa’id ee Helsinki oo marki ugu horreysay ay si wadajir u qabteen isaga iyo Viladmir Putin xilligaasna Trump wuxuu sheegay inuu aminsan yahay laamaha ammaanka ee Ruushka iney soo farageliyeen doorashadi 2016-kii dhacday.
Waxaan joogay Vietnam marka uu Mr Trump uu shir jaraa’id ku qabanayey marki uu wadahadal uu la yeeshay Kim jong-un uu si lama filaan ah uu u burburay. Sirkaasi jaraa’idna waxaan u arkay mid wanaagsanaa.
Shirki jaraa’id ee xalay waxaa mid cajiib ka dhigay micnaha uu ku fadhiyey. Tan labaadna shirka jaraa’id wuxuu ahaa mid sawir buuxa ka bixinayaa sida uu u egyahay seddexda sana iyo barka uu madaxweyne Trump sida uu egyahay.